Fanatanjahantena · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fanatanjahantena · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Fanatanjahantena tamin'ny Oktobra, 2017
Bilaogera Shiliana Mandeha Bisikileta
Amerika Latina22 Oktobra 2017
Iray amin'ireo tanàndehibe maloto indrindra eto amin'izao tontolo izao (izay tsy hireharehantsika loatra) i Santiago, renivohitr'i Shily . Nisy ny vondron'ireo mpankafy bisikileta, nanomana fomba iray mba hampiroboroboana ny fandehanana bisikileta ao an-tanàndehibe tao anatin'ity toe-javatra ity.
Amerika Latina18 Oktobra 2017
Tsy matahotra ireo mpanao 'surf' ao Shily na dia tonga aza ny vanim-potoana fahavaratra. Mandritra ny taona iray manontolo izy ireo no mivezivezy amin'ny morontsiraka mirefy 4.600 kilaometatra mahery ao Shily. Nizara lahatsary, traikefa ary ny fomba fiainany ireo vondrom-piarahamonin'ny mpankafy 'surf'.
Azia Atsinanana13 Oktobra 2017
Ny Mondialy Antserasera: Ny Bilaogin'I Lionel Messi Sa Blognovela
Amerika Latina10 Oktobra 2017
Sabatra roa lela ny tranonkala manana endrika tsy fantatra anarana . Etsy andaniny, mamahanana bilaogy tsy mitonona anarana ary maneho ny tenany ho tsy manantahotra ho tratran'ny valy bontana ireo olom-pirenena izay miaina isan'andro ny fangejan'ny governemanta. Etsy ankilany, sarotra ny manamarina hoe iza no mpanoratra ao amin'ny bilaogy iray.
Sodàna09 Oktobra 2017
Bitsik'ireo Afgàna: Adin'akoholahy, Ririnina, ary Sisintany Tsy Milamina
Azia Afovoany sy Kaokazy08 Oktobra 2017
Sarotra ny fepetran'ny Morgh Janngi, mahery setra ny habibiany ary mety ho lafo ho an'ireo mpiloka mandray anjara[...] indraindray manao antoka 100.000 ka hatramin'ny 200.000 Afghanis (Ar 5.900.000 - Ar 11.800.000)
Azia Atsinanana08 Oktobra 2017